အဘယ်ကြောင့်ဗီနိုင်းမြင်းခြံစည်းရိုးကိုရှေးခယျြ? - SAM ကို-ဗြိတိန်
သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် » သတင်း » သတင်း » အဘယ်ကြောင့်ဗီနိုင်းမြင်းခြံစည်းရိုးကိုရှေးခယျြ?
views:0 Author:ဆိုက်ကို Editor ကို အချိန် Publish: 2018-12-06 မူလ:ဆိုက်ကို
သငျသညျလယ်သမားတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းလျှင်, သင်, သင့်သည်မြင်းကာကွယ်ပေးချင်နွားတွေ, etc ရမယ်သင်ကသစ်သားမြင်းခြံစည်းရိုးကိုအလွယ်တကူမိုဃ်းကိုရွာစေခြင်းဖြင့် corroded ဖြစ်ကြောင်းသိရမည်။ သငျသညျအချိန်ကြာမြင့်စွာရှိပါကသင်သည်ဆေးထိုးခြင်းနှင့်အတခါတရံမြင်းများအားဖြင့်စားရမဆုံးရှုံးစေနိုင်သည်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့သတ္တုခြံစည်းရိုးလျှင်ကြောင့်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှလည်းညှိုးနွမ်းလိမ့်မယ်, ဒါသိပ်လေးလံသောကြောင့်ထိုသို့တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ကျနော်တို့အကောင့်သို့သငျသညျအကွောငျးကိုစိုးရိမ်နေကြအပေါငျးတို့သကိစ္စများယူ, ဒါကြောင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုဗီနိုင်းမြင်းခြံစည်းရိုးသငျသညျအကောင်းတစ်ဦးအတှေ့အကွုံဆောင်ခဲ့ဦးမည်ဖြစ်သော။
ဗီနိုင်းမြင်းခြံစည်းရိုး, corrode ချွတ်လက်သည်း, ပယ်လက်သည်းသို့မဟုတ် Discoloration အရောင်နှင့်ငါတို့သည်လည်းပြုပြင်န်ဆောင်မှုမပေးပါဘူး။ အဆိုပါဗီနိုင်းမြင်းခြံစည်းရိုးသစ်သားနှင့်သာလွန်ကြာရှည်ခံမှုအပေါငျးတို့သအလှအပနှင့် texture နဲ့ပရီမီယံထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါထူးခြားသောထိန်သိမ်း-mount ဒီဇိုင်းခြံစည်းရိုးပြားနီးကပ်စွာခြံစည်းရိုး၏အခြားအမျိုးအစားများမရောက်ရှိနိုငျသောတောင်စောင်းအတိုင်းလိုက်နာရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ သငျသညျဟဲဗီးဝိတ်တိုင်သုံးလျှင်သင်သည်လည်းသက်ရောက်မှုများနှင့် warpage ခုခံတွန်းလှန်နိုင်ပါတယ်။ သံမဏိအောက်ခြေရထားလမ်း sagging ကာကွယ်ပေးသည်။ အပြည့်အဝအရှည် installed အသက် 30 လက်မမြေအောက် struts လျှင်, လေတိုက်ဝန်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေနိုင်သည်။
မြင်း, နွား, လယ်ယာခြံစည်းရိုးနှင့်ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုး ကျက်စားရာအရပ်ထဲမှာမကြာသေးမီနှစ်များတွင်အလွန်ရေပန်းစားခဲ့ကြပြီ။ ဒါဟာတစ်ဦးထက်ပိုရှိအောင်နှစ်သက်ပုံပန်းသဏ္ဌာန်ကမ်းလှမ်းခြင်းနှင့်အဟောင်းသစ်သားနှင့်ဆူးဝါယာကြိုးခြံစည်းရိုးထက်ပိုရှည်ကြာရှည်ခံသည်။ ထို့အပြင်ကြောင့်အနည်းငယ်သာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလိုအပ်သည်။ တိုတောင်းသောခုနှစ်တွင်ဗီနိုင်းမြင်းခြံစည်းရိုးခိုးမှုနှင့်မည်သည့်အန္တရာယ်မှသင်၏မြင်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ပါဝါရှိသည်။ ဒါဟာအစသင်၏အိမ်သို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ဆိုင်မှု၏အသွင်အပြင်နှင့်တန်ဖိုးတိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးတစ်ဗီနိုင်းမြင်းခြံစည်းရိုးကို install ပါလျှင်, သင်သည်သင်၏လယ်ယာအရင်းအမြစ်များကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
တိုင်းပြည်ဘဝမြင်ကွင်းများကိုမကြာခဏသူတို့ရဲ့အမြီးနှင့်အတူလှပသောမြင်းများမြင့်မားတဲ့ကြီးပြင်းသို့မဟုတ်တိတ်တဆိတ်လတ်ဆတ်တဲ့ပန်းချီကားခြံစည်းရိုးကဝိုင်းစိမ်းလန်းစိုပြေစိမ်းလန်းသောကျက်စားရာအရပ်ပေါ်မှာစားကျက်များပါဝင်သည်။ ဤအခြံစည်းရိုးကယ့်ကိုသာယာလှပတဲ့များမှာသော်လည်း, သူတို့သည်လည်းလက်တွေ့ကျသောအသုံးပြုမှုရှိသည်။ ခြံစည်းရိုးဘေးကင်းလုံခြုံမြင်းများကိုစောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်သောဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ထိုသူတို့သည်စစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်စားကျက်ဘို့အခွင့်အလမ်းကိုဆက်ကပ်။ ကြောင့်မြင်းရဲ့အလိုလိုတုံ့ပြန်မှုမှသူတို့အများဆုံးကိုအခြားတိရစ္ဆာန်များထက်ကလောင်သွားအတွက်ဒဏ်ရာပိုမိုဖြစ်ပေါ်နိုင်ဖြစ်ကြသည်။ ထို့ပြင်များစွာသောမြင်းတို့ကိုအလွန်တန်ဖိုးရှိသောများမှာ, ဒါကြောင့်တစ်ဦး, လုံခြုံကြံ့ခိုင်ခြင်းနှင့်ဆွဲဆောင်မှုခြံစည်းရိုးတည်ဆောက်ဖို့ကျိုးနပ်သည်။ လက်တွေ့, လုံခြုံမှုနှင့်ဗေဒ - တစ်ဦးခြံစည်းရိုးရွေးချယ်တဲ့အခါ, သုံးခုစလုံးအရေးကြီးသောအင်္ဂါရပ်များကိုစဉ်းစားပါ။ အသီးအသီးအင်္ဂါရပ်၏အရေးပါမှုကိုပိုင်ရှင်ရဲ့ဘတ်ဂျက်, တိရစ္ဆာန်၏တန်ဖိုးနှင့်သင့်ဦးစားပေးပေါ်တွင်မူတည်သည်။ စဉ်းစားရန်များစွာသောရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်။
သင်တစ်ဦးသစ်သားခြံစည်းရိုးကိုသုံးလျှင်, သင့်မြင်းထွက်ပြေးရန်လွယ်ကူပေမည်။ သင်ဤလမ်းအတွက်စျေးကြီးတဲ့မြင်းဆုံးရှုံးဖို့အတှကျဒါဟာလွယ်ကူသည်။ တစ်ဦးကခိုင်မာတဲ့ဗီနိုင်းမြင်းခြံစည်းရိုးဖြစ်ပျက်နေဒီကိုတားဆီးလိမ့်မယ်။ ဗီနိုင်းမြင်းခြံစည်းရိုးကိုလည်းဥပဒေကြောင်းအရကန့်သတ်သတ်မှတ်ထားမလိုအပ်တဲ့ဒုက္ခဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါမသကဲ့သို့, သင်, ဒေသခံတပ်ဆင်ခလိုအပ်ချက်များကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ဗီနိုင်းမြင်းခြံစည်းရိုးကိုအသုံးပြုဖို့သောအခါ, သင်သည်သင်၏မွေးမြူရေးခြံများအတွက်လှပသောကြည့်ဖန်တီးပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျရောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ပါကလည်းသင့်ရဲ့ရှုခင်း၏ခြုံငုံတန်ဖိုးကိုတိုးမြှင့်နှင့်၎င်း၏စျေးနှုန်းကိုတိုးမြှင့်စေမည်။
ဤရွေ့ကားသင်တစ်ဦးဗီနိုင်းမြင်းခြံစည်းရိုးကိုရွေးချယ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတချို့ရှိနေပါတယ်။ အဲဒီနောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီနိုင်းမြင်းခြံစည်းရိုးသင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်လိမ့်မည်, သင်လုံခြုံစွာသင့်ရဲ့မြင်းနှင့်သင့်အခြားအရင်းအမြစ်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ သင်အမြဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မေးခွန်းများကိုအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုမမေးနိုင်ပြီးငါတို့သည်သင်တို့၏မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်ပျော်ရွှင်ကြလိမ့်မည်။
ဗီနိုင်းမြင်းခြံစည်းရိုးကိုရှေးခယျြ ဗီနိုင်းမွေးမြူရေးခြံရထားလမ်းခြံစည်းရိုး မွေးမြူရေးခြံရထားလမ်းခြံစည်းရိုး ဗီနိုင်းမွေးမြူရေးခြံခြံစည်းရိုး